Kanada waxay bilawday shahaado socdaal oo cusub oo tallaalka COVID-19 ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Kanada waxay bilawday shahaado socdaal oo cusub oo tallaalka COVID-19 ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Kanada waxay bilawday shahaado socdaal oo cusub oo tallaalka COVID-19 ah.
Dukumeentiga cusub ee safarka dhijitaalka ah ee Kanada wuxuu lahaan doonaa koodka QR ee iskaanka ee garoomada diyaaradaha, saldhigyada tareenada iyo meelaha kale ee laga soo galo.
Shahaadada caddaynta tallaalku waxay yeelan doontaa calaamadda aqoonsiga Kanadiyaanka waxayna buuxinaysaa heerarka waaweyn ee kaadhka caafimadka smart.
Dukumeentiga waxaa ku jiri doona magaca qofka, taariikhda dhalashada iyo taariikhda tallaalka COVID-19 - oo ay ku jiraan qiyaasaha qofku qaatay iyo goorta la tallaalay.
Kanadiyaanka ma awoodi doonaan inay raacaan diyaarad safar shisheeye iyo mid gudaha ah la'aanteed shahaado caddaynta tallaalka laga bilaabo Noofambar 30.
Kanada Raiisel wasaare Justin Trudeau Waxaa maanta lagu dhawaaqay in shahaado safar oo cusub oo COVID-19 ah ay daaha ka qaadayso dowladda dalka.
"Iyadoo dadka Kanada ay raadinayaan inay mar kale bilaabaan safarka, waxaa jiri doona shahaado-caddeyn tallaal oo la jaangooyay," Trudeau ayuu yiri, isagoo ku boorriyay dadka Kanadiyaanka ah ee aan sidaas sameynin inay sida ugu dhaqsaha badan u tallaalaan. "Waan joojin karnaa masiibadaan oo aan ku laaban karnaa waxyaabaha aan jecelnahay."
Dawladda qaranku waxay bixinaysaa kharashka ku baxaya bixinta baasaboorka tallaalka ee caadiga ah, Trudeau ayuu yidhi. "Waxaan soo qaadi doonaa tab."
In Canada, daryeelka caafimaadka waxaa inta badan bixiya dawladaha gobolka waxaana inta badan maalgeliya dawladda qaranka, mararka qaarkood waxay keentaa muran siyaasadeed oo ku saabsan xukunka iyo cidda bixinaysa waxa.
Gobollada qaar, oo ay ku jiraan Saskatchewan, Ontario, Quebec, Nova Scotia, Newfoundland iyo Labrador iyo dhammaan saddexda dhulalka waqooyi, ayaa durba bilaabay isticmaalka heerka qaran ee caddaynta-tallaalka, ayuu yidhi Trudeau.
Dukumeenti safar oo cusub oo dhijitaal ah, oo loogu magac daray Baasaboorka Tallaalka, ayaa lahaan doona koodka QR ee lagu baadho madaarada, saldhigyada tareenada iyo meelaha kale ee laga soo galo.
Nofeembar 29, 2021 at 06: 11
Waan ognahay, Kanada waxay bilaabaysaa baasaboor tallaal oo COVID-19 ah si loogu fududeeyo muwaadiniinta inay u safraan dibadda, Raiisel wasaare Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay. Dukumeentiga dhijitaalka ah ee shaaca laga qaaday Khamiista wuxuu lahaan doonaa koodka QR ee iskaanka ee garoomada diyaaradaha, saldhigyada tareenada iyo meelaha kale ee laga soo galo. Sida shuruudaha cusub ee tallaalka ay u soo baxayaan dadka safarka ah, waxaan ka shaqeyneynaa inaan hubinno in kuwa safraya ay helaan wax la isku halayn karo.